गहुँको बिउमा ४० प्रतिशत अनुदान | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार गहुँको बिउमा ४० प्रतिशत अनुदान
on: २८ कार्तिक २०७५, बुधबार १८:४३ प्रदेश समाचार
कात्तिक २८, रुपन्देही । जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाले किसानलाई गहुँको बिउमा ४० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । अनुदानको गहुँको बिउ आनन्दवन र जनविकास सहकारी संस्थाले वितरण गरेका छन् । गहुँको बिउमा अनुदान दिँदा झण्डै २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने नगरपालिकाको अनुमान छ । मणिग्रामस्थित आनन्दवन सहकारीले वडा नं. १ देखि १० र कोटिहवास्थित जनविकास सहकारीले वडा नं. ११ देखि १७ सम्म अनुदानको बिउ किसानलाई विक्री गरेका छन् ।
नगरपालिकाले राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी लिमिटेडले बजारमा ल्याएको उन्नत जातको सुधारिएको गहुँको बिउमा किसानलाई अनुदान दिएको हो । नगरपालिकाले अनुदानका विषयमा व्यवस्था मिलाउन १४ नम्बर वडाध्यक्ष सोहनप्रसाद थारुको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
यस वर्ष करीव सात सय क्विण्टल अनुदानको गहुँको बिउ किसानले सहकारीमार्फत लैजाने नगरपालिकाको अनुमान छ । गहुँ खेती गर्ने किसानहरुले आवश्यक कागजातको आधारमा अनुदानको बिउ प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले किसानलाई व्यावसायिक बनाउन र केही राहत दिन बिउमा अनुदान दिइएको बताए ।
आनन्दवन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष माधव पाठकले नगरपालिकाले बिउमा अनुदान दिँदा किसानलाई धेरै राहत मिलेको बताए । तिलोत्तमाले किसानलाई चाहेजति गुहँको बिउमा अनुदान दिएको हो । नगरपालिकाको कृषि समितिले किसानलाई अनुदानमा गहुँको बिउ उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो ।